LA ISKUMA SALAAMIN: Bixitaanka Maraykanka ee Afghanistan oo keeni kara burburka NATO & kala tagga dalalkii Maraykanka ku tiirsanaa min Khaliijka ilaa Bariga Fog | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka LA ISKUMA SALAAMIN: Bixitaanka Maraykanka ee Afghanistan oo keeni kara burburka NATO...
LA ISKUMA SALAAMIN: Bixitaanka Maraykanka ee Afghanistan oo keeni kara burburka NATO & kala tagga dalalkii Maraykanka ku tiirsanaa min Khaliijka ilaa Bariga Fog
(Hadalsame) 03 Sebt 2021 – ”Ma jiraa qof xulufo la ahaa oo dib u aamini doona Maraykanka kaddib ka bixitaankii aanu cidna kala tashan ee Afghanistan?!” ayuu is waydiiyey Dr Mustafa Fetouri oo maqaal dheer qoray.
Waana su’aal taagan. Haa, Maraykanku wuxuu Afghanistan ka baxay isagoo aan marna ka tala gelin xubnaha kale ee Gaashaanbuurta NATO oo sababta ay dalkaa u tageenba ay ahayd hiillo ay u muujinayeen weerarkii uu isagu halkaa ku qaaday, waxaa dheer in Washington aanay xitaa wargelin markii ay wadahadalka la furaysey Daalibaan, xitaa MW hore ee Ashraf Ghani ayaan loo sheegin.
Sida uu qabo RW hore ee Britain, Tony Blair, oo Maraykanka kula biiray duullaankii Afghanistan 2001, wuxuu bixitaanka halhaleelka ah ee aan nidaamsanayn ee Maraykanka ku sheegay mid “halis ah, aan daruuri ahayn, aysan wax dan ah xitaa iyaga ugu jirin isla markaana ah bandhig loo sameeyey bahdilka Galbeedka.”
Dalalka Bariga Fog ee South Korea, Japan iyo Taiwan, oo muddo dheer ku tiirsanaa Maraykanka oo shafka u garaacayey inuu ka ilaalinayo halista gobolka ay ku yaallaan ayaa hadda ka fikiraya waxa uu calafkoodu noqonayo, kaddib markii ay arkeen hab-dhaqanka Maraykanka.
Siyaasaddii arrimaha dibedda Maraykanka ee uu Trump ku socdey oo ku dhisnayd ”Maraykanka koow” ayaa ku dhisnayd xushmo darro uu u muujinayey dalalka kale ee Galbeedka iyo kuwa xulufada la ahaa sida dowladaha Khaliijka oo uu marar badan bahdiley, isagoo xitaa Boqorka Sucuudiga ee Salmaan u sheegay inuusan todobaad sii joogi doonin Maraykanka la’aantii.
Yeelkeede, tan ugu darani waa farriinta uu dirayey heshiiskii uu la galay kooxda Daalibaan bishii Febraayo ee sanadkii tegey, taasoo ahayd in uu Maraykanku iskaga tegi karo saaxiibadii markii uu doono haddiiba uu dantiisa ka dhex arko.
Markii uu Joe Biden xilka Aqalka Cad qabtay bishii Jannaayo ee sanadkan, wuxuu xulufada Maraykanka siiyey ballan qaad afka baarkiisa ah, isagoo u sheegay inuu wax ka bedelayo hab-dhaqankii ciyaalnimada ahaa ee Trump una sheegay in Ameerika ay soo noqotay, balse aanu bedeli karin bixitaankii qorshaysnaa ee Afghanistan.
CIIDAMADA EU – Haatan kaddib markii ay cashar ku barteen Afghanistan Midowga Yurub oo ah dalalka ugu badan NATO ayaa ka baaraan degaya inuu samaysto ciidan isaga u gaar ah oo ka madax bannaan Maraykanka oo ay nus qarni ka badan ku tiirsanaayeen doorkiisa difaac, taasoo keeni karta burburka Gaashaanbuurta NATO, oo uu dhaawac badan gaarsiiyey Trump oo dalal badan ku eedeeyey inaysan dhiibin qaaraankii lagu lahaa.
Previous articleJilaa caan oo Hindi ah oo geeriyoodey & sababta geeridiisa oo la isku khilaafsan yahay
Next articleTurkiga oo kaddib gabdhihii Komaandooska ahaa ballan qaad kale u sameeyey dalka Somalia